War Robots dia lalao hetsika sy fitifirana | Vaovao IPhone
War Robots dia lalao mpitifitra hetsika izay hampifalifaly anao
Miverina ao amin'ny iOS App Store izahay mitady zavatra mahaliana, indrindra ankehitriny, ary ny Krismasy dia manampy antsika hanana fotoana malalaka bebe kokoa, noho izany, mila fialamboly bebe kokoa isika. Androany izahay mitondra lalao aminao handaniana fotoana sy hampitoniana ny hozatry ny sakafo hariva amin'ny taona vaovao raha manome lesona momba ny toekarena an-trano kosa ny zaodahinao, manolotra anao izahay War Robots, lalao ahafahanao mamela ny setroka amina sary vitsivitsy, mora ampiasaina ary misy lohahevitra tsotra. Ny zava-dehibe indrindra dia maimaim-poana tanteraka (miaraka amin'ny fandoavam-bola tafiditra) ary mifanaraka amin'ny vaovao rehetra ao amin'ny tontolon'ny Apple.
Toy izao no anoloran'i Pixonic azy amintsika, orinasanao mpamorona:
War Robots dia lalao multiplayer marobe miady amin'ny ekipa 6v6 amin'ny fotoana tena izy. Midira amin'ny laharan'ny mpiady vy!
Ady io, mpanamory fiaramanidina! Vonona ve ianao amin'ny fanafihana tsy ampoizina, ny tetika hafetsifetana be pitsiny sy ny tetika Machiavellian izay omanin'ireo mpifaninana aminao? Aringano ny robot fahavalo, sambory ny fanilo rehetra ary havaozy ny fitaovam-piadiana hampiakarana ny herin'ny ady, ny hafainganana ary ny fiaretana ny robot-nao ady. Fanamby ny tenanao amin'ny sarintany tsirairay avy ary ampiasao tetikady sy tetika samihafa handresena ny ady rehetra!
Afaka mifehy robot 24 samy hafa isika miaraka amin'ny karazana fitaovam-piadiana mahery 20. Ny antony ara-tsosialy dia mifandraika ihany koa, amin'izay isika afaka mamorona fianakaviana sy miady amin'ny mpifaninana. Ireo mpifaninana erak'izao tontolo izao dia hiandry antsika amin'ny maodim-pianakaviana marobe. Etsy ankilany, manana fampiharana ho an'ny Apple Watch izy ary mifanaraka amin'ny iPad. Milanja 477MB, izay tsy ratsy amin'ny lalao misy ireo toetra ireo. Tadika amin'ny fiteny tsy tambo isaina, izy io indray dia manana fividianana voaaro tsy tambo isaina, saingy anjaran'ny mpampiasa tsirairay no mahalala na mendrika ny fividianan'izy ireo izany na tsia.
Robots ady. Multiplayer PvPmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » War Robots dia lalao mpitifitra hetsika izay hampifalifaly anao
Eny misy izany.
Efa intelo aho no nanoratra ny heviny ary mbola tsy navoaka. Amin'izao fotoana izao raha misy ny fangatahana.
Podcast 8x16: Apple tamin'ny 2016, jiro sy aloka tao anatin'ny taona tetezamita